Onye na - enyocha ndụ - China Life detector Manufacturers, Suppliers
Ngwá ọkụ na ngwaọrụ nnapụta
Ọkụ robot ọkụ
Ngwaọrụ nnapụta Hydraulic
Ngwaọrụ nnapụta ọkụ
Ngwá ọkụ na-anyụ anyụ
Uwe ojii na akụrụngwa ndị agha
Onye na-enweghị eriri ikuku
EOD bọmbụ uwe
Near Silent akuakuzinwo
Ọnụ ụzọ na-emebi
Nche onyunyo Radar
Ihe na-agbawa agbawa na ọgwụ ọjọọ
Hụ site na mgbidi radar
Mgbo-àmà okpu agha
Ugbo ala eji agba mgbo
EOD setịpụrụ ngwaọrụ
Ngwaọrụ nkpuchi ogologo oge
Ndị uwe ojii na mkpu
Ihe mgbawa mgbawa
Liquid Detector Ihe Ọjọọ Dị Ize Ndụ
UAV nyocha radar
Ihe nchoputa gas
Laser methane gas ihipu detector
Single nchọpụta gas
Igwe ikuku gas
Ngwa nchekwa m
Ngwa nchekwa maka mmiri
Hand-ẹkenịmde laser remote methane gas ihihi detector (JJB30)
Bọmbụ gbawara agbawa-Gosiri Firefighting Na Scouting Robot
RXR-M80D Ọgụ Na-alụso Robot
TS3 Ikuku Remote-achịkwa Life Buoy
ROV-48 Mmiri Nnapụta Remote Control Robot
ROV2.0 N'okpuru Mmiri Robot
YSR Bọmbụ gbawara agbawa gosipụta ihe ọhụụ ndụ ọhụụ
Okwu Mmalite ihe mgbawa na-egosi ihe ngosi ihe ọkụ ọkụ ọtụtụ ụzọ bụ ụzọ mgbapụta ihe mejupụtara atọ dabere na ụda, ugboro ole, ọkụ eletrik, magnetism, ebili mmiri na teknụzụ ndị ọzọ n'otu, na-eji nchọpụta ụda, nchọpụta microwave, ntinye nke electromagnetic, nchọpụta vidiyo na ụkpụrụ ndị ọzọ. Usoro nyocha na nnapụta ndụ. Onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na-ahụ maka ihe mgba ọkụ na-agbapụta mgbawa gbawara mgbawa na-egosi ikuku vidiyo telescopic wireless, onye na-achọpụta ihe ọkụkụ na-agbawa agbawa gbawara agbawa, ihe ...
YSR Radar life
YSR Radar Life Locator na-eji teknụzụ radar na mbara igwe (UWB) iji meziwanye nsogbu nke nnapụta na-eso usoro ọdịda n'ihi ihu igwe, ọkụ ma ọ bụ mbibi ọdachi, nnukwu mmiri, idei mmiri, ala ọma jijiji ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ. Onye nchoputa ndu kwesiri nke oma maka nzoputa ndu, ichota ndi ozo site na ichota obere mmeghari nke iku ume. Ebe ọrụ dị karịa 25m. YSR Radar ndụ locator egosiwo na ọ bụ ngwaọrụ dị irè n'ịchọpụta ihe ịrịba ama ndụ dị ka iku ume na ...
V9 Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi wireless ọdịyo na video ndụ detector
Nkọwa ngwaahịa Ihe nchọpụta ndụ na vidiyo bụ ihe ndu ndu nke ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ na vidiyo iji chọọ ebe ndị lanarịrị. Onye na-enyocha ndụ na vidiyo bụ anya na ntị nke ndị ọrụ nnapụta na mkpọmkpọ ebe nke mkpọmkpọ ebe iji nyere ha aka ịchọta nke ọma ndị lanarịrịnụ. A maara ya maka arụmọrụ ya na izi ezi ya. Naanị site na itinye igwefoto n'ime obere oghere, ndị nnapụta nwere ike ịchọpụta ọnọdụ ndị lanarịrị ngwa ngwa ma jiri nlezianya nyochaa ...
V5 ọdịyo na vidiyo ndụ
V5, ejiri ya iji chọta ndụ n'okpuru mkpọmkpọ ebe. Egosiwo ya na bylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ọkụ Mba. Onye na-enyocha ndụ vidiyo V5 na-enye ndị nnapụta ohere ịhụ ndị ọnya jidere n'okpuru iberibe ala, ma soro ha na-emekọrịta ihe t nwere igwefoto na-agbagharị na igwefoto infrared yana enwere ike iji ya ọbụlagodi gburugburu ebe gbara ọchịchịrị. V5 Video Life Detector nabatara ndị otu nzọpụta gburugburu ụwa。Ọ nwere ike ịnye mkparịta ụka doro anya na vidiyo. Na ihe oyiyi na ...
A9 Audio detector
Isi: A na-eji ya maka ndị na-achọ ọrụ na ọnọdụ ọdachi dịka ọdịda ụlọ, na-eji onye na-achịkọta ihe na-adịghị ike nke onye nchọpụta na usoro nkwukọrịta olu iji chọpụta ọnọdụ na ọnọdụ nke ndị ahụ tọrọ atọ, na inye ndị nnapụta ihe ọmụma banyere ndị ahụ metụtara n'okpuru mkpọmkpọ ebe site na akara ngosi di iche iche na iguzo olu okwu olu. Ngwa Ọgụ ọkụ, nnapụta ala ọma jijiji, ihe ndị metụtara ụgbọ mmiri, nnapụta miri emi nke ọma, usoro nchekwa obodo na-egosipụta atụmatụ ngwaahịa ...
Forestlọ ọrụ National Forest Defense na ot ...
[Ihe ngosi ohuru ohuru] Igwe ikuku ...
Beijing topsky abuana ke igba egbe ...
Abịakọrọ ikuku ụfụfụ ọkụ extinguishing de ...
Zuru ezu nkọwa nke elu-nkenke eq ...
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086 136 8301 5302